किन ? शसंकित बने नेपाली व्यवसायी कोरियन कम्पनीको शर्तमा – Hotpati Media
किन ? शसंकित बने नेपाली व्यवसायी कोरियन कम्पनीको शर्तमा
२० चैत्र २०७५, बुधबार ०८:४२ मा प्रकाशित (2 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट
१९ चैत, काठमाडौं । नेपालमा गाडीको एसेम्बल प्लान्ट राख्न लागेको कोरियन कम्पनीको शर्तबारे नेपाली अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुले लगानी बोर्डसमक्ष चासो राखेका छन् । लगानी बोर्डले १० अर्ब ५४ करोडको लगानी स्वीकृत गरेको कम्पनीले आफूले लगानी नउठाइन्जेल नयाँ कम्पनीले एसेम्बल प्लान्ट राख्न नपाउने शर्त राखेपछि नेपाली उद्योगी व्यवसायी सशंकित छन् ।
उनीहरुले मंगलबार बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर मोट्रेक्सले राखेका शर्त स्वीकार गरिए त्यसले बजारमा विकृति ल्याउने र अन्य कम्पनी आउने बाटो बन्द हुने भन्दै गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन् ।
मोट्रेक्सले आफूले उत्पादन सुरु गरेपछि ७ वर्षसम्म अर्को कम्पनीलाई गाडी उत्पादनको अनुमति नदिन शर्त राखेको छ । यसले प्रतिस्पर्धा रोक्ने भन्दै व्यवसायीले मोट्रेक्सको शर्त सरकारले स्वीकार गरे त्यसले समस्या मात्रै ल्याउने बताएका छन् ।
नाडा अटो मोबाइल्स डिलर्स एसोसियनका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल आफूहरुले सञ्चारमाध्यममा आएको मोट्रेक्सका शर्तबारे जानकारी मागेको बताए । उनले बोर्डले प्रतिस्पर्धाको युगमा त्यसलाई मिचिने गरी कसैलाई उत्पादनको अनुमति नदिने बताएको दुलालले जानकारी दिए ।
विदेशी कम्पनीले ब्यापार गर्न नपाउने कानून विपरित मोट्रेक्सले शर्त राखेको व्यवसायी बताउँछन् । उनीहरुले सरकारले विदेशी लगानी ल्याउनु सही भएपनि कानून मिचेर सिन्डिकेट र मोनोपोली हुने गरी नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
भेटमा सीईओ अधिकारीले हाललाई सैद्दान्तिक स्वीकृति मात्रै दिइएकाले शर्तबारे निर्णय भइनसकेको र त्यो शर्त मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषय सरकारको भएकाले आवश्यकता र औचित्य हेरेर निर्णय लिने उनकाले बताएको भेटमा सहभागी अर्का एक ब्यापारीले बताए ।
मोट्रेक्सले सरकारसँग विभिन्न सुविधा र शर्तहरु राखेको छ । आफ्ना शर्तहरु पुरा भए बजार भाउ भन्दा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म सस्तोमा गाडी उपलब्ध गराउन सकिने दावी कम्पनीले गरेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।
उसले ५ वर्षभित्र गाडी उत्पादन थाल्ने भनेको छ, तर त्यो अवधिसम्म विदेशबाट गाडी ल्याएर विक्री तिरण गर्नु पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
उसले नेपालमै तालिम केन्द्र चलाउने र त्यसमा सरकारले कर छुट दिनुपर्ने शर्त पनि राखेको छ । उसले कम्पनी नाफामा नगइन्जेल अरु कम्पनीलाई उत्पादनमा ल्याउन नहुने शर्त पनि तेस्र्याएको छ । त्यसका लागि ७ वर्ष लाग्ने उसको दावी छ । ७ वर्षपछि पनि १० अर्बभन्दा कम पुँजी ल्याउने कम्पनीलाई गाडीको उत्पादनमा अनुमति दिन नहुने पनि मोट्रेक्सको माग छ ।
कम्पनीले नेपालमा उत्पादित गाडीमा १०र१० प्रतिशत मात्रै अन्तःशुल्क लगाउनु पर्ने शर्त पनि राखेको छ ।
कम्पनीले ५ वर्षसम्म कर्पोरेट ट्याक्स, मूल्य अभिवृद्धि कर र लाभांश ट्याक्स नलिन सरकारसँग भनेको छ । उसले प्लान्ट बनाउँदा लाग्ने सामाग्रीको आयतमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले नै प्लान्ट राख्ने जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र २ वर्ष भाडा छुट गर्नुपर्ने र सबै सुविधा सरकारले लगिदिनुपर्ने लगायतका थुप्रै शर्त पनि छन् ।
हाल नेपालमा गोल्छा अर्गनाइजेशनले बजाज बाइकको एसेम्बल प्लान्ट चलाइरहेको छ ।